नेपालमा अब लकडाउन हुन्छ कि हुदैँन - Parichaya.com
By परिचय	 On २० मंसिर २०७८, सोमबार १७:५१ 0
नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालमा दुई जनामा ओमिक्रोनको संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो।
नेपालमा ओमिक्रोनको संक्रमण पुष्टि भएसँगै यो भाइरस विश्वका ३६ वटा मुलुकमा देखिएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार संक्रमण फैलिएका देशबाट नेपाल आएका ६६ वर्षीय र उनको सम्पर्कमा आएका ७१ वर्षीय विदेशी नागरिकमा संक्रमण देखिएको हो। ६६ वर्षीय व्यक्ति मंसिर ३ गते नेपाल आएका थिए।
उनीसँग सम्पर्कमा आएका ७१ वर्षीय व्यक्ति र उनलाई मंसिर ७ गते कोभिड–१९ सँग मिल्दा जुल्दा लक्षणहरु देखिएपछि परीक्षण गर्दा कोभिड–१९ को नतिजा पोजिटिभ आएको थियो। परीक्षणमा पोजेटिभ आएकाहरुको एस–जीन परीक्षण गर्नु पर्ने हालको नयाँ रणनीति अनुरुप परीक्षण गर्दा दुवैजनाको नमुनामा एस–जीन फेला परेको थिएन। एस–जीन फेला नपरेका उक्त दुवै नमूनाहरुको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा मंसिर १९ गते ९आइतबार० राति नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भएको थियो।
यस्तै नेपाल प्रवेश गर्नका लागि २४ देखि ४८ घण्टा भित्रको पीसीआर रिपोर्ट र पूर्ण मात्र खोप लगाएको १५ दिन अगाडिको प्रमाणपत्र चाहिने प्रावधान छ। त्यो रिपोर्ट नभए हवाई उडान गर्न पनि पाइदैन। यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर होम क्वारेन्टिनमै बस्न मिल्ने प्रावधान र पूर्ण मात्रा खोप लगाएको रिपोर्ट नभएका व्यक्तिहरुलाई आफ्नै खर्चमा अनिवार्य रुपमा होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सोही प्रावधान अनुसार विदेशबाट आएका उक्त व्यक्ति क्वारेन्टिनमै बसिरहेको डा। अधिकारीले बताए। उनले भने,‘उहाँ ९६६ वर्षीय विदेशी नागरिक० नेपाल आउँदा पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ थियो। त्यही पनि क्वारेन्टिनमा बस्नु भएको थियो। संक्रमित दुवै जनाले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा लगाउनु भएको छ।’
संक्रमित दुवै जनाको स्वास्थ्य अवस्था समान्य रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘दुवै जना आइसोलेसनमा हुनु हुन्छ। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुनुहुन्छ।’ डा. अधिकारीले दुई व्यक्तिहरुसँग सम्पर्कमा आएकाहरुको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका ६६ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको बताए।
नयाँ भेरियन्टको संक्रमण रोकथामका लागि के गर्दै छ, सरकार
२४ नोभेम्बरमा अफ्रिकामा ‘ओमिक्रोन’ पुष्टि भएसँगै नेपालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले निगरानी बढाएको छ। सरकारले ओमिक्रोन भेरियन्ट संक्रमणका पुष्टि भइसकेको अफ्रिका, भारत, बोत्स्वाना, हङकङलगायतका नौ देशबाट नेपालमा आउन प्रवेश रोक लगाएको छ। डा. अधिकारीका अनुसार कोभिड–१९ संक्रमणको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन पुष्टि हुन थालेपछि निगरानीलाई बढाइएको हो। अब सरकारले यसपछि बाहिरबाट आउनेहरुको निगरानी बढाउने, स्वदेशभित्रै पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्ने र गराउने कुराहरुमा बढी केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनले भने, ‘अहिलेको भेरियन्टको संक्रमण रोकथाम गर्नका लागि भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्कका सही तरिकाले प्रयोग गर्ने, हातको सरसफाइमा ध्यान दिने नै हो। यही कुराहरुले नै अहिलेको भेरियन्टलाई पनि काम गर्ने छन्। यी जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्नले संक्रमणबाट केही हदसम्म बच्न सकिने छ।’
यस्तै खोपले संक्रमणपछि हुने जटिलताबाट केही हदसम्म बचाउने भएका कारण सबैलाई खोप लगाउन डा। अधिकारीले आग्रह गरेका छन । ‘कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाइरहेका छौँ। यो खोपले स्वास्थ्यमा हुने जटिलताबाट रोक्छ। संक्रमणलाई पनि केही हदसम्म कम गर्दै लिएर जान्छ। हामी स्वास्थ्य जटिलता हुने अवस्थामा गएनौँ भने अस्पतालहरुमा व्यवस्थापन गर्नलाई पनि सहज हुने अवस्था हुन्छ।’ डा। अधिकारीका अनुसार संक्रमणको सबै भन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको बाहिरबाट आउने क्रमलाई रोक्ने र त्यसलाई कम गर्दै जाने हो। ‘र देश भित्र देखिएको संक्रमणहरुलाई स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरुले थेग्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी संक्रमणको अवस्थालाई राख्नुपर्ने जुन काम गर्नुपर्ने हो, सरकार त्यसैमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको छ’, उनले भने।
नयाँ भेरियन्ट देखिएपछि लडाउनको सम्भावना कति
लकडाउन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारे सरकारले कुनै पनि छलफन नगरेको डा। अधिकारी बताउँछन। उनले भने, ‘यसका लागि कुनै पनि निर्णय गरिएको छैन। लकडाउन गर्नु पर्ने विशेष परिस्थितिहरु अनुसार गर्ने कुरा हो। अहिले नै हामी त्यो अवस्थामा पुगेका छैनौँ।’
संक्रमण रोकथाम गर्नका लागि आफूहरुले जानेका सबै कुराहरुको पालना गर्दै अगाडि बढ्न आवश्वक रहेको डा। अधिकारीले बताए। उनले भने,‘हामी धेरैले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएका छौँ। स्वास्थ्य सुरक्षाका हिसाबले हेर्ने हो भने तुलनात्मक रुपमा हामी धेरै सुरक्षित छौँ। बाँकी रहेका व्यक्तिलाई पनि हामी खोप लगाउँदै गयौँ। जनस्वास्थ्यका मपदण्डको पालना गर्ने गराउने काम गर्दै गयौँ भने जनजीवनलाई हामी सहज अवस्थामै अगाडि लिएर जान सक्छौँ।’
लकडाउनको आवश्यकता कहिले
लकडाउन स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरुले थेग्न नसक्ने अवस्था भयो भने स्वास्थ्यमा पूर्वाधारहरु थप गर्नका लागि संक्रमणको चक्र तोड्न( यी यावत कुराहरु गर्नका लागि समयावधि लिनका लागि गरिने डा। अधिकारी बताउँछन्। उनका अनुसरा अहिले नै नेपाल लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छैन।
उनले भने, ‘लकडाउनको सामाजिक, आर्थिकजस्ता अरु पाटाहरु पनि छन्। यी सबै कुराहरुलाई विश्लेषण गरेर गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा सरकार कुनै पनि निर्णय गरेको छैन र सोचेको पनि छैन।’ मन्त्रालयले निगरानी बढाउने, जनस्वाथ्यका मापदण्डको पालना गर्ने र खोप अभियानलाई तिव्र गतिमा लिएर जाने कुराहरुमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेको उनले बताए।